Home » Webstedsdesign
09.05.2020 Category: Webstedsdesign
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, saingy tsy voatery ho lafo izany. Tsy mila intsony ianao mandoa vola dolara an’arivony hampivelatra ny fehezan-dalàna ananany, ary avy eo dia mandoa an’arivony maro isan-taona mba hitazonana io tranonkala io. Eny, tsy izany intsony.
2 Ny Face Off: WordPress vs Website Builders
2.1 1 – Fleksibilitet
2.4 4 – Plugins og tilføjelser
2.5 5 – omkostninger
2.7 7- Begrænsninger
2.8 8- Popularitet
3 Fananganana: WordPress na tranonkala tranonkala?
4 Inona àry no eritreretintsika?
Raha te hanongana tranokala iray amin’ny vidiny mora ianao, dia manana safidy roa lehibe – fananganana iray amin’ny WordPress, na manangana iray amin’ny iray amin’ireo dragona maro sy mpamono tranokala DIY azo alaina (Wix).
Ireo safidy roa ireo dia manome rafitra matanjaka sy mavitrika amin’ny fananganana ny tranokalanao, ary koa ny rafitra ho an’ny fitantanana sy famoahana ny votoatin’ny Internet.
WordPress dia maimaim-poana ny fampiasana ary azo alamina amin’ny server rehetra izay manohana ny PHP sy MySQL, izay saika ireo serivisy rehetra maneran-tany no manao an’ity andro ity. Ny mpikarakara tranokala dia matetika mandoa vola isam-bolana raha toa ka te hampiasa azy ireo ianao.
Fa iza no tokony hampiasainao? Iza no tsara kokoa? Hanandrana hanome valiny mazava ianareo.
Mila blôgy vaovao na tranokala ve ianao? Sary natolotr’i FastWebHost
Ny Face Off: WordPress vs Website Builders
1 – Fleksibilitet
WordPress dia mahery, saingy manana ny mari-pahaizana fianarana izy. Hjemmeside-bygherrer er desuden dia matanjaka loatra fa mora kokoa amin’ny fampiasana. Ny fiaraha-miombon’antoka dia legetøj izao manaraka izao:
Ireo mpanorina tranonkala tsara dia manana tonian-dahatsoratry ny sehatry ny pejy izay ahafahanao mamolavola singa ao anaty tranonkala. WordPress tsy manana maso interface. Fa kosa, misy WYSIWYG (izay hitanao fa azonao) redaktør.
Mora kokoa ny miara-miasa amin’ny totozotra sy ny fanontam-pirinty satria afaka mahita izay mandeha amin’ny fotoana tena izy. Ny tonian’ny WYSIWYG dia sarotra kokoa satria tsy maintsy voamarikao hoe ny tarehintsoratra tsirairay nosoratanao dia mitovy amin’ny bokotra preview.
Ankehitriny dia misy fomba sasantsasany ahafahana mamorona tonian-dahatsoratra mivantana amin’ny WordPress. Ny bitsin’ny rindrambaiko sasany dia afaka manampy io fonctionna io, saingy hitantsika fa tsy misy na dia kely na mora ampiasaina legetøj ny fanodikodinam-pahefana Miaraka amin’ireo mpanamboatra tranonkala DIY.
FastWebHosts gratis webstedsbygger – tonga isaky ny fonosana fampiantranoana.
Ny WordPress er afama mamorona na inona na inona – avy amin’ny bilaogy manokana ao amin’ny tranonkalan’ny onjam-peo feno tsipika, mankany amin’ny fivarotana amin’ny aterineto. Vokatr’izany, indraindray dia mahatsapa ho mampikorontan-tsaina sy mifintina izy- satria natao mba hahafahana manao zavatra maro.
Ireo mpamboly tranokala dia tsy dia marefo loatra. Izy ireo dia natao hananganana tranonkala mahazatra legetøj ny orinasa madinika sy trano fisakafoanana. Ny ankamaroany dia hanampy ampamoaka vaovao isanandro, saingy mbola tsy mavitrika tahaka ny famoronana ny tenanao amin’ny WordPress.
Miaraka amin’ny fanodikodinam-pahefana, dia manova zavatra ao anatin’ny rafitra ianao. Azonao atao ny mampifanaraka ny zava-drehetra ao anatin’io rafitra io, saingy ny drafitra fototra sy ny fizotry ny tranonkala dia mitovy ihany Ireo mpamboly tranokala dia mirehareha amin’ny fananana ireo "tsara indrindra" izay manaraka ny fomban-drazana nomem-boninahitra. Tsy voatery hisalasala ianao raha toa ka azo alaina ny tranokalanao, saingy tsy hahazo tombony amin’ny famoronana tranonkala koa ianao.
Jereo kely Designer Gleb eller Duplos mba hijery ny dikany.
4 – Plugins og tilføjelser
Ny iray amin’ireo tanjaka amin’ny WordPress er ny fiarahamoniny goavana. Namorona ity fiaraha-monina ity lohahevitra an’arivony sy plugins ho an’ny WordPress. Izany dia manitatra ny asan’ny tranonkalanao. Raha manana hevitra ianao, dia azo inoana fa hitanao ny plugin izay mamela anao hanao izany. Saingy satria ireo plugins ireo dia noforonin’ireo olona samihafa izay afaka manatanteraka tsy an-kijanona. Ny plugin dia mety ilainao hanatsotra ny kode amin’ny loha-hevitrao, na manala plugin have mba hiasa tsara.
Ireo tranobe mpikarakara tranokala dia tsy manana plugins maro na lohahevitra legetøj fra WordPress. Fa, satria tafiditra ao an-trano avokoa ny fanampim-panaovan’izy ireo, ny ankamaroan’izy ireo dia ho tsara ihany raha tsy mila mampiasa azy ireo ianao. Ny tsy mitongilana dia mazava ho azy fa tsy hahita plugins amin’ny zavatra rehetra ianao. Indraindray ianao dia mila manao tsy misy.
Ny tombony lehibe har izay WordPress dia manana plugins maimaim-poana. Ny ankabeazan’ny plugins dia maimaimpoana. Na dia mety mila mividy aza ianao mba hahazoana plugins mahery na singa have manokana, ny adiresy maimaim-poana dia tsara ho an’ny rehetra. Ny ankamaroan’ny tranokala fananganana tranonkala amin’ny lafiny iray dia voakasina na famandrihana.
5 – omkostninger
WordPress ingen mahatonga ny tranokalan’ny fanorenana mora, nefa mbola mila fotoana sy fahaizana ihany koa izy. Izany ingen antony fananana mpandrindra iray Mety ho lafo (na dia kely noho ny eritreritrareo) aza. Ny tranonkala iray mahazatra dia mety handany $ 800 + (amin’ny farany ambany). Ny fikojakojana ny vohikala dia mety mbola mitaky mpandraharaha mahaleotena hanampy anao, izay mitaky sazy fanampiny. Avy eo dia misy ihany koa ny vidin’ny fividianana domæner (matetika $ 1,50 hatramin’ny $ 14 isan-taona) ary ny fampiantranoana ($ 12 / taona +) Ny ankamaroan’ny mpanorina tranonkala dia manomboka amin’ny latsaky ny $ 20 / volana. Azonao atao ny manoratra ny tenanao ary manova kopia, mampakatra sary, na manampy pejy vaovao anatin’ny segondra. Mbola mila mandoa ho an’ny faritra misy anao ianao, fa ny fampiantranoana kosa dia tafiditra ao.
Miaraka amin’ny mpikirakira iray anefa dia tsy maintsy miakatra ny vidiny. Ny mpamorona tranonkala iray dia mety manandrana mamitaka anao amin’ny vidiny fidirana ambany na na "maimaim-poana"Tranonkala. Saingy rehefa te-hanomboka izany ianao dia mila mandoa. Izany ingen antony maha-zava-dehibe ny hanamarinana ny vidiny alohan’ny hametrahana tranokala miaraka amin’izy ireo.
Hjemmeside MpanorinaVidiny (isam-bolana)
Hurtig webhost Gratis miaraka amin’ny hosting (manomboka amin’ny $ 1 / volana)
BoldGrid $ 4,19 / mo
SiteBuilder $ 4,99 / mo
Wix $ 9,25 / mo
Doodlekit.com $ 10,00 / mo
Weebly.com $ 12,00 / mo
Squarespace $ 18,00 / mo
Ny mpikarakara tranonkala tsirairay dia tonga miaraka amin’ny fananana azy manokana. Tsy misy fepetra takiana. Mividiana anarana anaran-tserasera ary mampifandray izany amin’ny tranonkala mpanorina, ary tsara ianao raha handsha.
WordPress dia hafa tanteraka. Mba hampiasana WordPress ilainao mahita tranonkala iray izay afaka mametraka WordPress amin’ny MySQL sy amin’ny fanohanana PHP. Azonao atao koa ny mianatra ny fomba fampiasana ftp na fomba have ahafahana mandefa ny WordPress rakitra amin’ny mpampiantrano anao.
Ny tombony lehibe ho an’ny WordPress dia afaka manosika azy hatrany amin’ny tranonkala have izay manolotra fifanarahana tsaratsara kokoa na tolotra tsara kokoa (na roa). Amin’ny tranonkala mpamorona tranokala, ianao dia eo amin’ny fandraisana azy ireo mandrakizay.
Ny mpampiantrano tsara indrindra dia hanome anao koa ny mailaka manokana, fa ny ankamaroan’ny mpanorina tranonkala tsy.
Ny ankamaroan’ny mpikarakara tranokala dia hanana fetrany sasany, legetøj ny be dia be ny fifamoivoizana (båndbredde), na dia amin’ny safidy lafo vidy aza. Ny sasany mety mampiseho ny dokam-barotra ao amin’ny tranokalanao miaraka amin’ny sarany ambany sarany.
Miaraka amin’ny WordPress, voafetra ny haingana amin’ny haingam-pifidianana. Azonao atao ny mametra ny fetra sasany saingy misy foana ny fampivoarana enhver amin’ny toerana izay azonao atao mba hiverina amin’ny asa tanteraka.
Ny tranokala tranokala DIY diia somary vaovao. Nanomboka nalaza izy ireo nandritra izay taona vitsy lasa, indrindra tamin’ny fivoaran’ny Shopify – tranokala DIY manokana ho an’ny e-handel kely.
WordPress etsy ankilany dia manodidina ny 14 dage. Nampiasaina mihoatra ny 27,5% amin’ireo tranonkala 10 ambony ambony, ary ny 60% amin’ny tranonkala rehetra dia misy.
Ny resaka malaza satria misy fiantraikany amin’ny fomba mora ampiasaina izany. Raha toa ka mihazakazaka amin’ny WordPress ianao dia afaka mamaly mora ny Google ianao. Amin’ny tranokala iray, ny fanantenanao tsara indrindra dia ny orinasa manana tari-dalana mendrika na fanampiana pejy.
Fananganana: WordPress na tranonkala tranonkala?
Nampanantena izahay fa hanome valim-bavaka mazava ho anareo izahay, ary izahay. Saingy aloha isika dia hiray tsikombakomba rehefa misy dikany ny fampiasana ny tsirairay.
Te hahalala bebe kokoa momba ny fijery farany sy ny endri-tsoratry ny tranonkalanao
Ilaina ny tranokala iray tsy manana ny môdelina
Eritrereto ny fifamoivoizana være
Mila adiresy mailaka (avy amin’ny fampiantranoana)
Inona àry no eritreretintsika?
Mety hiahiahy koa ianao momba ny fikojakojana sy ny fanohanana. Avereno-indrækning, aza manao. Maro ny mpampiantrano, (anisan’izany izahay) manolotra tolotra WordPress. Tsy voatery hisalasala momba ny fanavaozana, ny fiarovana na ny fiarovana indray ianao.
Na dia izany aza, aza mamela ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitra ho anao – indraindray ianao dia mila mamela ny tananao maloto ary manandrana zavatra. Manoro hevitra anao izahay Mifidy ny tranonkala tsara indrindra izay manolotra fanohanana fra WordPress sy tranokala maimaim-poana. Raha manao ilay asa ho anao ny tranonkala mpanorina, dia ankafizo, miarahaba anao. Raha tsy izany dia manana fampiantranoana izay azonao atao ny mametraka WordPress amin’ny alalan’ny tsindry iray.
Rupi S. Azrot ingen tale jeneralin’ny FastWebHost – orinasa fampiantranoam-barotra amin’ny Internet. Nandritra ireo taona 17 taloha dia FastWebHost ingen nampiantrano ny domæner 200.000 ao amin’ny foibe data-n’ny 6 manerantany. Nanangana FastWebHost i Rupi rehefa vita ny Masters avy amin’ny Oniversiten’i Californien. Raha mikasa ny tetikasa vaovao iray ianao, dia faly izy manampy.
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, söyüşlü tsy voatery ho lafo izany. Tsy